Mas’uul Shaqada Looga Cayriyey Taageeridda Israel Oo Codsaday In La Sugo Ammaankiisa | allsaaxo online
Published on April 18, 2019 by said · No Comments
Agaasimihii Xafiiska Wasiirka Arrimaha Dibedda ee bishii hore la cayriyey, C/llaahi Dool ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu maanta siiyey Wargeyska Times Of Israel ee ka soo baxa Israel ayaa sheegay in lagu khasbay inuu soo cararay Somalia, kadib, markii uu mucaarado xooggan kala kulmay hadal uu horey ugu baaqay DFS xiriir Diplomaasiyadeed la yeeshaan Israel.
Waxa uu sheegay inuusan Masaafuris gelin, balse sababo la xiriira Ammaankiisa uu uga soo cararay dalkiisa.
Wareysiga uu Abdullaahi Dool siiyey Wargeyska Times Of Israel oo ka koobnaa Farriimo E-mail iyo Barta Bulshadda ee WhatsAPP waxa uu ku sheegay inuu ku sugan yahay meel aan ka fogayn dalkiisa hooyo iyo inuu sababo la xiriira Ammaankiisa uu uga soo cararay dalkiisa.
Mar wax laga weydiiyey Qorshaha Mustaqbalkiisa waxa uu xusay inuusan ogeyn waxa Mustaqbalka imaan kara, balse uu xaqiiq ahaan jeclaan lahaa inuu ku nagaado gudaha dalka Somalia.
Waxa uu carrabka ku dhuftay inuu u baahan yahay in la sugo bad-qabkiisa, sababo la xiriira Dacaayadihii laga faafiyey ee sababtay in laga casilo shaqadiisa, waa sida uu hadalka u yiri.
Dhinaca kale, Waxa uu mar kale difaacay Aragtidiisa ee uu horey ugu bidhaamiyey inay DFS xiriir Diplomaasi la yeeshaan Israel, wuxuuna xusay inuu ku qanacsan yahay in xiriir lala yeesho Israel ku jirto waxa u uugu yeeray Danaheenna Guud.
“Mid ka mid ah sababaha, waxaan ugu baahanahay Xiriir aan la yeelano Israel si ka-dhasqo badan sidii hore si ay taasi u keento dhamaadka dagaalka lagula jiro Xag-jirayaasha ee lidka ku ah nolosha dadkeenna” ayuu yiri Abdullaahi Dool.
Wareysiga uu Abdullaahi Dool siiyey Wargeyska Times of Israel waxa uu ku sheegay inkastoo ay Somalia qeyb ka tahay, kana sii ahaanayso Dunida Carabta, inaysan jirin sababo Somalia ka hor joogsan kara inay xiriir caadi ah la yeeshaan Israel, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu xusay inay jiraan in ka badan 20 Waddan oo Muslim ah oo xiriir Diploamaasi la leh Israel, isla markaana aysan jirin sababo ay Somali xiriir ula yeelan la’dahay Israel.
Agaasimihii Xafiiska Wasiirka Arrimaha Dibedda ee bishii hore la cayriyey, C/llaahi Dool waxaa uu ka gaabsaday inuu naqdiyo dadkii ka dambeeyey in shaqada laga cayriyo, balse waxa uuxusay inuu rumeysan yahay in isaga raalli-gelin laga siiyo xilkii laga cayriyey iyo qaladaadkii laga galay Aragtidiisa.
Wargeyska Times Of Israel waxa uu qoray inuu Abdullaahi Dool oo ah aabe 4 carruur leh, kuna dhashay Beled-weyne uu ku soo biiray Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somalia sannaadkii 1983-kii, kana soo shaqeeyey Safaaradaha Somalia ku lahayd Britain iyo Kuwayt.
Abdillahi Dool oo 59-jir ah waxa uu Wareysiga uu siiyey Wargeyska Times of Isreal ku xusay inuu isaga tegaay Safaaradda Somalia ee Britain, markii uu dagaalka sokeeye ka bilowday Somalia, kadibna uu noqday La-taliye Gaar ah.
Sannadkii 2011-kii ayuu sheegay inuu Somalia dib ugu laabtay, isla markaana uu soo qabtay xilka Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Tamarta, ka hor inta uusan xilal sare oo kala duwan ka soo qabanin Wasaaradda Arrimaha Dibedda, ka hor inta aan laga cayrinin xilkii uu ka hayey Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Calaamiga bishii hore ee March..